(31 sanad, 5 bil, 5 maalmo)
Dagaaladii sokeeyay ee Soomaaliya waa dagaalo aan dhamaad laheen, kaasi oo bilaamay 1991di. Dagaalkaan waxoo dhaliyay degenaasho la'aan iyo nolol la'aan oo 20sano gaartay.Dagaalada intaas oo sano soo jiray, maalinbo maalinteeda kale woo isbedelaayay. Maanta dagaalka waxoo u dhaxeeyaa, dowlad aad u liidata iyo arkagixiso rabto in ee dalka qabsato.
Sidii ee qaramada midoobay iyo mareykanka ee uuga baxeen dalka soomaaliya 1993, soomaaliya codkeeda mala maqli jirin.
Wixii ka danbeeyay 2000 dalka waxaa soo galay ciidamo shisheeye, sida kuwa itoobiyaanka iyo ciidamda amisom oo taageero u fidiyo Dawladda maanta jirta ee kumeel gaarka ah, dagaalkii sokeeye ee soamliya waxa uu ahaa mid maslaxad kusalaysan
Runtii Dagaaladii sokeeyay ee soomaaliya waa dagaalo aan dhamaad laheen.waxuuna bilaamay 1991di. Dagaalkaan waxoo dhaliyay degenaasho la'aan iyo nolol la'aan oo 21sano.
Dagaalada intaas oo sano soo jiray, maalinbo maalinteeda kale woo isbedelaayay. Maanta dagaalka waxoo u dhaxeeyaa, dowlad soamlia oo
Dagaaladii sokeeyay waxee dalka u horseeday nolol wanaag laheen iyo dowlad la'aan.Waxoona dalka u kala qeybsamay qeybo badan oo shacabka ee ku doonayaan maamul. Waxaa jirta qeyb soomaaliya ka mid ah oo dagaaladii sokeeyay ku bilaabay, oo maanta rabto in ee goosataan. Dagaaladii gobolada woqooyiga iyo gobolada dhexe.Markii la riday dowladii dhexe neh, dowlad cusub ma imaanin oo dagaalkii meeshiisa oo ka sii socday. Sanad iyo bar ka dib dalka waxaa ka dhacday abaar isla markaas neh waxaa imaaday heyaadaha gargaarka ee qaramada midoobay, waxaana la socday ciidamo dalal badan ka socda oo runtii rabay in ee dalka nabadeeyaan. Ł aakiin waxaa lagu eedeeyay in ee shacabka dilaayaan, isla markaas neh weerar lagala horyimaaday. Ciidamada mareykanka oo ka mid ah kuwa gargaarka ee QM, ayaa bilaabay in ee diyaaradahooda la soo kacaan, waxoona dalka galay dagaal labaad oo nuuc kale ah.Maraykanka iyo qaramada midoobay waxee soomaaliya ka baxee ayada oo dagaal socdo, laakiin qaboowsaday. Markii ee ka baxeen ilaa 2000 soomaaliya codkeeda danbe mala maqli jirin. Sidii ee dowladii dhexe u dhacday ilaa la abaabulo Dawladdahaan federaaliga, soomaaliya ma leheen wax hogaan ah. Dadka wee iska ganacsan jireen.
↑ Twentieth Century Atlas – Death Tolls and Casualty Statistics for Wars, Dictatorships and Genocides, Users.erols.com 2011-04-20
↑ Famine Foretold
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dagaalkii_sokeeye_ee_Soomaaliya&oldid=223041"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Nofeembar 2021, marka ee eheed 18:48.